induction brazing pombi kuti pombi kugumisa musangano kubatana
musha / Applications / Induction Brazing / brazing pombi kusvika pombi kumagumo
kupenya pombi kuti pombi ipere
Categories: Applications, Induction Brazing, induction brazing machine Tags: pombi inopenya, brazing pombi induction heater, induction brazing connection, Induction Brazing Machine, kuburitsa kuburitsa pipe, induction brazing pombi system, induction ichiona sevhisi, kuburitsa brazing chubhu, kuburitsa brazing tubing, induction kuchenesa zvikamu, pombi kuti pombi ichipfuta
Induction brazing pombi kupombi kupera kusangana gungano.
Kureba kwe Tube kunosiyana kubva pa 39.3 ″ (1m) kusvika 236.2 ″ (6 m).
Kutya: Around 1382 ° F (750 ° C)
Time: 1 miniti kusvika pamasekonzi makumi matatu pakati
Iyo yekupedzisira chubhu yekureba inosiyana kubva parizvino 1.57 ″ kusvika 3.94 ″ (40mm kusvika 100 mm) uye iyo yakapetwa chubhu kureba inosiyana kubva pa 3.28ft kusvika 19.685ft (1m kusvika 6 m). Iyo lap Joint kureba inogona kusvika kumusoro kune yakanyanya 0.28 ″ (7 mm) mune ramangwana.
Unhu hunodiwa: Mapapu akabatanidzwa, maburi ese, mutsetse wekubatana mukati memucheto wemukati uye mutsetse wekubatana paOD yemachubhu anofanirwa kuzara zvakakwana ne brazing filler.
Yakabatanidzwa ine simba remuviri zvinodiwawo.
Iwe uchatipa mazano ekupedzisira parameter pamwe nekuyerera uye kuzadza simbi chinodikanwa cheyakakodzera brazed majoini & zvigadziriso, kana zviripo.Final chubhu yekunze dias inosvika inosvika 1.97 ″ (50 mm). Kureba hakuzosiyana zvakanyanya. Perforated chubhu ukobvu inogona kusvika kusvika ku0.079 ″ (2 mm) yakakwira.